Indlela yokuhalalisela ozakwabo besifazane ngo-8 Mashi, 2018
Ukuhola inkampani yokuqala futhi epholile emsebenzini ngokuhlonipha ngoMashi 8 kulula kunanini ngaphambili. Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukwenza iskripthi esihle ngezinombolo ezahlukene, izigcawu. Isibonelo, amadoda angakwazi ukufunda izifiso evesini noma nge-prose. Abesifazane ngokujwayelekile bayothanda ozakwabo kanye nokuhalalisela kubhalwe ngamazwi abo. Abamele ubulili obuhle bangabonisa ukuhlonipha nokubonga kwabo ngokufunda amagama abantu abakhulu. Kulesi sihloko sitshele indlela yokuhalalisela abesifazane ngenhloso yokuzijabulisa ngokuzikhandla ngoMashi 8 eqenjini. Ukusebenzisa imibono ehlongozwayo, ungenza iholidi ehhovisi lithakazelise futhi alikhohlwa.
Indlela yokuhalalisela abesifazane ngomsebenzi wabo ngoMashi 8 - izibonelo zezigcawu ezihlekisayo
Izitifiketi ezihle futhi ezihlekisayo zingaba yisisekelo kwanoma yisiphi isimo. Ngosizo lwabo, amadoda angahalalisela kahle bonke osebenza nabo besifazane ngo-Mashi 8 futhi abonise imizwa yabo efudumele kubo. Ukujabulisa abameleli bezocansi abalungile bazosiza ukusebenza okumangalisayo. Funda kabanzi mayelana nendlela yokuqala engabongelela ngayo abesifazane ehhovisi ngoMashi 8, izosisiza ukuba sikhethe izibonelo zezigcawu.
Isimo sokuqala "Umkhosi wama-Oscar"
Amadoda kusengaphambili ahlela izincwadi zokuhalalisa ngendlela yama-Oscars futhi anikeze kubo bonke abesifazane besethimba. Kungaba ukubonga ngomsebenzi omuhle kakhulu, ukusebenza kahle kwezabelo zomsebenzi. Kodwa futhi amadoda angamane aqokomise izimfanelo ezinhle zomsebenzi ngamunye: ikhono lokulalela nokunikeza iseluleko esiwusizo, ikhono lokubamba ingxoxo. Isimo esinjalo kufanele sidlalwe njengomkhosi wefilimu wangempela. Ngakho-ke ngokusebenza kwalo kuyadingeka ukukhetha ukuhambisana okuhambisana nomculo, ukusetha indawo.
Izibonelo zezigcawu zangempela zokubonga abesifazane ngoMashi 8 emsebenzini
Yenza ukuhalalisela okuhle kwabesifazane, uma okungaphezu kwamadoda kanye nesimo esivamile. Kungaba ukushaywa kweziqephu zamafilimu adumile nemiculo. Omunye angathatha njengesisekelo umdwebo ovela kwi "Ural pelmeni" mayelana nokubonakala kweholidi ngo-Mashi 8. Ungafunda izibonelo zemikhiqizo enjalo kumavidiyo alandelayo:
Indlela yokuhalalisela abesifazane ngoMashi 8 emsebenzini - izikripthi ngezibonelo zezinombolo
Isikripthi sokuqala seholide ka-Mashi 8 singenziwa ngezinombolo ezihlukahlukene. Isibonelo, faka izigcawu eziningi, ukuhalalisela evesini naseprose. Futhi ungakwazi ukuqinisa inkampani ekusebenzeni komsebenzi we-karaoke noma unike isikhathi somdanso. Ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi kungenzeka kanjani ukuhalalisela abesifazane emsebenzini ngokungajwayelekile ngo-Mashi 8 futhi wenze iskripthi esihle, umfundi uzosizwa imibono nezibonelo zethu ezilandelayo.
Indlela yokwenza isimo sokuhalalisela osebenza nabo emsebenzini ngoMashi 8?
Ukubhala isimo esithakazelisayo, kumele uqale ukhethe isihloko esifanele. Kungaba ukudlala ifilimu yezinsikazi ezinhle. Futhi ozakwabo bangabambelela empeleni ngesitayela sezwe lasentshonalanga, lamafiya. Ukuqaphela okukhethekile kumele kuhokhwe izigcawu zesiteji nokwenza izinkondlo. Isibonelo, iholidi lingabanjwa ngokuvumelana nalesi simo:
Siyakuhalalisela abesifazane osebenza nabo evesini.
Izigcawu, ukusebenza kwamadoda anezingoma.
Ukunikezwa kwezipho, ukufundwa kwe-prose yokuhalalisela.
Ukwenza impi yokudansa noma ingoma.
Uhlelo olunjalo olulula lungase lusekelwe yimincintiswano nemidlalo ehlukene. Kulesi simo, ukuhleleka kwezinombolo kungashintshwa njengoba kufunwa.
Isikripthi sesampula ngo-Mashi 8
Ungenza umbhalo wokugubha ngoMashi 8 emsebenzini, usebenzisa izibonelo zevidiyo zemikhosi. Kubafundi bethu, sithatha inguqulo ethakisayo yebhizinisi ehhovisi. Kuzokusiza ukhethe kalula amakamelo afanele emcimbi wokuqala.
Ngiyahalalisela abesifazane besonto 8 kuvesi
Ukubingelela evesini kuzokufanelekela kunoma iyiphi inhlangano yebhizinisi ngokuhlonishwa ngoMashi 8. Bangakwazi ukufunda ngabanye kumlingani ngamunye wesifazane noma ungakhetha isifiso esisodwa esihle kubo bonke abasebenzi bethimba. Khetha ukuhalalisela kwangempela nokuhle emavesini abesifazane abasebenza emsebenzini weqembu elibambisene ngokuhlonishwa ngoMashi 8 kungaba kusuka ezihlolweni zethu ezilandelayo.
Ukukhethwa kwezinkondlo ezinhle ngokuhalalisela
Kubalandeli bezinkondlo ezinhle nokuthinta, sathola ukuhalalisela kwangempela ngeholidi ngo-Mashi 8. Imisebenzi enjalo isiqiniseko sokujabulisa bonke osebenza nabo besifazane abasebenza eqenjini. Ngesifiso, amavesi angase ahlanganiswe nezifiso ngamagama akho. Okwesishiyagalombili ku-March - hhayi ngeze. Siyigubha entwasahlobo. Phela, abesifazane bahlale behle, Njengelanga kanye nembali yehlathi.
Vumela iphunga labo linike ama-roses, Makube nemfudumalo, Futhi izinyembezi kuphela ziyojabula, Futhi zonke amaphupho ziyogcwaliseka!
Sifisa, siqhakaze, siqhakaze, siphuphe amaphupho akho, siphila njalo njengenkosi Futhi sithandwa, uthando!
Vumela intwasahlobo ikulethela injabulo, injabulo kanye neholo. Ezempilo, ububele, umusa, Ukujabula ngaphezu kwezolo!
Vumela lokhu kukhanya okukhanyayo, izwe libe likhazimulayo futhi limibalabala, Ngakho yonke imzuzu kanye nehora ngifisa wena inhlanhla!
Amantombazane-ozakwabo, ngiyakuhalalisela, Futhi ngifisa sengathi nijabula ngenhliziyo. Vumela iholidi elijabulisayo uletha injabulo kuwe. Ukuphumelela empilweni, ake uhambe nawe.
Uthando nokuphila kuhlale kujabulisa, Ukudansa, ukucula nokumomotheka. Futhi vumela impumelelo ifike emsebenzini, Futhi endlini kukhona ukuhleka okujabulisayo kuphela.
Emva kwakho konke, ngoMashi - kusilethela intwasahlobo nokufudumala. Ngifisa, empilweni, njalo nginenhlanhla. Vumela wonke umndeni wakho ube nempilo, Vumela izingane zijabule, zibonga.
Ngikuhalalisela ngenhliziyo yami yonke futhi, ngifisa sengathi uzomomotheka kanye neholidi. Futhi uyoba nenhlanhla ukuletha inhlanhla ngoMashi, Futhi vumela impilo ikhule nge-mimosa entwasahlobo.
Ngentwasahlobo Ngo-March ukupholisa Futhi ngiphunga elimnandi le-mimosa ngiyakuhalalisela, ozakwabo. Vumela konke kufezeke ngokujulile.
Vumela empilweni kuyoba nenjabulo kuphela, Emndenini - ubuhle, uthando, ukushisa. Futhi esikhwameni semali esikhwameni, Ukuze ube ngokwanele kwengubo.
Idayimane, ngenxa yokudla okumnandi - Noma yini ofuna ukuyenza. Futhi ukumamatheka, ukuqhakaza, Emphefumulweni wayefuna ukucula!
Ingxenye enhle yeqoqo Kusukela phansi kwenhliziyo futhi ngesabelo esihle, Ngenxa yokuthi bangcono kuneClara noRosa, Kumelwe manje unikeze imimosa. Inkulumo iyathandeka, ngokuqinisekile uyakufanelekela, Futhi okubaluleke kakhulu, njalo uhlale uphelile, Ngempela, thina, madoda, sikhulekele, sikunakekele, futhi sizokuvikela. Ozakwethu, siyakuhalalisela ngeholide lentwasahlobo! Ngenxa ye-8 ka-Mashi sithembisa uSmile kuwo wonke umuntu, kahle, ikhekhe netiyi!
Ukuthokoza kwangempela ngabesifazane osebenza nabo kusukela ngo-8 Mashi ngamagama abantu abakhulu
Owesifazane ngamunye ngosuku luka-Mashi 8 uzojabula ukuzwa kokubili ukuhalalisela ozakwabo, kanye namazwi amanga abantu abaningi. Kungaba izinkondlo noma i-prose, ekhuluma ngobuhle besifazane nokuhlakanipha. Ukukhetha abalingani besifazane ngo-8 Mashi, ukuhalalisela ngamazwi abantu abakhulu kuyosisiza ukuba sikhethe izibonelo. Zihlanganisa amazwi okuqala abondlo, izazi zefilosofi nabalobi.
Izibonelo zokuhalalisela ngamazwi abantu abakhulu
Ukusebenzisa ukuhalalisela okhethwe yizwi labantu abakhulu, ungakwazi ukunqoba inhliziyo yanoma yimuphi owesifazane. Sincoma ukuthi zifundwe ngesikhathi sekhefu phakathi kwezinombolo ezinkampani ngomhla ka-Mashi 8. Kulokhu, imibhalo enhle ayikwazi ukuphindwa kuphela, kepha isetshenziselwa ukugcwalisa amakhadi okubingelela. "Abesifazane badalwa ukuba bathande, hhayi ukuqondwa" (Oscar Wilde).
"Ukuze abe mnandi, owesifazane kufanele abe nomsundu omnyama, umkhonto omnyama futhi ahambisane nomuntu omthandayo" (Yves Saint Laurent).
Owesifazane unenhlakanipho kunamadoda. Wake wake wezwa ngowesifazane olahlekelwe ikhanda ngoba indoda enemilenze emihle? (Faina Ranevskaya)
Ama-Rogue adinga isikhwama noma impilo, abesifazane - bese-ke, nokuningi. (USamuel Butler)
"Kulo wesifazane kukhona imfihlakalo emangalisayo, emangalisayo, imfihlakalo enkulu yokuphila, umthombo wazo zonke izinjabulo nokukhathazeka konke" (Arne Garborg).
Indlela yokuhalalisela ozakwabo besifazane ngo-Mashi 8, uma kuningi labo ehhovisi
Emaqenjini lapho abesifazane abaningi basebenza khona, isinqumo esifanele sokubamba iqhaza kuyoba ukhetho lokuthokoza jikelele. Futhi, amadoda angabheka izipho ezingavamile. Ukusebenzisa imibono nezibonelo ezikhethwe thina, singafunda ukuhalalisela abesifazane ngomsebenzi ngamazwi okuqala ngomhlaka 8 Mashi, uma kukhona eziningi zazo. Kuyinto engavamile ukuhalalisela ozakwabo besifazane ngoMashi 8 ngemidwebo noma izinkulumo zokucula. Ukwenza lokhu, ungafaka esimweni sokugubha i-lottery yemiklomelo, i-lottery. Kubalulekile ukuba izinkampani zikhethe imincintiswano, imidlalo. Imincintiswano evamile iphelele ngomhlaka-8 Mashi ongenakulibaleka eqenjini lapho abesifazane abaningi basebenza khona.
Yeka ukuthi kuyadabukisa kanjani ukuhalalisela abesifazane ngo-Mashi 8 ngamazwi abo ku-prose
Kulula kakhulu ukubhala i-prose enhle ngokuhalalisela ngamazwi akho. Kodwa lokhu kungcono ukujwayelana nezibonelo ezenziwe ngomumo zezifiso. Bazokusiza ukuba ukhethe amagama okuhalalisela ngokunembile futhi kahle. Ngesikhathi esifanayo, imibhalo elungiselelwe ingashintshwa, ishintshwe futhi ifakwe nezinye izifiso. Kuhle ukuhalalisela ozakwabo besifazane ngo-Mashi 8 ukusiza abafundi bethu izibonelo ezikhethiwe ze-prose ebhalwe ngamazwi abo.
Izibonelo zokuthinta i-prose ngenkulumo yokubongela yabalingani kusukela ngoMashi 8
Phakathi kwezibonelo ze-prose ekhethwe nguwe, ungathola imibhalo eminingi yangempela ngezifiso. Zifanele ukusetshenziswa njengesizathu sokwenza ukuhalalisela kubo bonke osebenza nabo besifazane. Ngithandekayo, othandana nabo abathandekayo, ngikuhalalisela ngenhliziyo yonke ngomhlaka 8 kuNcwaba. Ngihlale ngifuna ukuhlala besimangalisa nabesifazane abahle. Ngifisa ukugqugquzela abantu ukuba benze imisebenzi emihle futhi bahlale befudumele futhi bejabule emakhaya abo. Ngifisa emphefumulweni wokuvumelana njalo, uthando lweqiniso-lweqiniso. Vumela umsebenzi uhambe kahle, vumela umsebenzi uletha injabulo, ukuchuma nokuthula.
Ozakwethu abathandekayo nabangcono, ngo-8 Mashi kusukela enhliziyweni ngifisa ukuba nenhlanhla emihle yesifazane, ubuhle obungenakunqotshwa nobuhle obuhle bezwe langaphakathi. Vumela intwasahlobo iphefumulele futhi injabulo, vumela usuku lonke lugcwale imizwelo ekhanyayo, izipho zomusa kanye nemibono eqinile yabathandekayo.
Ozakwethu! Ngikuhalalisela ngosuku lwesifazane! Vumela izinhliziyo zenu zigcwale injabulo engenasidingo, uthando nomusa. Vumela konke kuqhubekile ngokuphepha emsebenzini, nasekuphileni komuntu siqu, futhi kuletha impumelelo emangalisayo. Okuhle kuwe izinsuku, ubusuku bokuthanda nokuphumula okuhle kakhulu embuthanweni wabantu abaseduze.
Siyakuhalalisela eholidini lekhefu elisenyakatho lezisebenzi zethu ezithandekayo, ezimangalisayo, ezimangalisayo. Vumela ilanga likhanye nsuku zonke emafasiteleni akho, vumela izimbali zijabulise, izingoma ze-nightingales, iphupho ligcwaliseke. Impilo nenhlanhla, ukuchuma nenjabulo, ukumomotheka nokuthanda okungapheli kuwe, besifazane abathandekayo!
Ngo-Mashi 8, ngithanda ukuhalalisela osebenza nabo ngaleli holide elihle kakhulu kusukela enhliziyweni yami! Bathi intwasahlobo ukuvuswa kwezinto zonke, ukuvuselelwa komphefumulo nomzimba. Ngakho ake isandla sakho sihambe kahle, injabulo, ukuchuma nempilo. Emsebenzini, ngifisa sengathi unosuku oluphumelelayo nomzwelo omuhle. Ukuqhuba iholidi elijabulisayo nelithakazelisayo ngoMashi 8 ehhovisi kuzojabulisa bonke ozakwethu besifazane. Ukuze ubulili obuhle, ungenza iskripthi endabeni yefilimu yanamuhla noma ukhethe isiqondiso sokungathathi hlangothi. Okuphoqelekile kunoma iyiphi inkampani ehhovisi kuyoba imidwebo, ukufaniswa kwamadoda anezinkondlo kanye ne-prose ye-congratulatory. Ukuhalalisela okuhle nokuhle kungabhalwa ngamagama akho. Futhi ungafunda amagama abantu abakhulu mayelana nezifiso ezinhle nenjabulo kubo bonke abesifazane besenhlanganweni. Ukusebenzisa imibono nezibonelo ezikhethwe thina, singafunda ukuhalalisela abesifazane ngo-Mashi 8 kuhle futhi akuvamile.
Umsindisi we-Apple 2016 - umlando weholide, amasiko, izimpawu, izinyathelo, izinhlanhla. Ukuncoma okufushane nokuhleka ngokuguquguquka kweNkosi evesini, i-prose, ama-sms, ama-postcards nezithombe
Izinkondlo ezimfushane nezinhle mayelana nokuwa kwezimbongi zaseRussia enkulisa nasezikoleni
I-Ramadan 2016: ukuqala nokuphela eRussia, eTunisia, i-United Arab Emirates. ISimiso sikaRamadan 2016 eMoscow, ikhalenda kanye nokuhalalisela
Ukuzinikezela kubafundi: isimo seholidi esimnandi - imincintiswano ezithakazelisayo, izivivinyo nezitifiketi
Ziyini izinambuzane eziyingozi emzimbeni womuntu?
Umshukela we-Nut negalikhi e-Toulouse
Ukwelashwa kwesifo esingapheliyo se-pyelonephritis
Ilayisi yokudla okunciphisa umzimba nokuhlanza umzimba
Kungani abameleli bobulili obuqinelayo besisicela ukuba sithole izipho?
Ama-biscuits e-Ginger "Okuvamile"
Yini eholela ebugovu nasekuzinikeleni?
Index E nalokho esikudlayo
Izinto okufanele zenziwe eTibet
Ungakha kanjani ubuhlobo nomamazala?
Abantu bazizwa kanjani nge-cunnilingus?